I-ßrand I-Loft Entsha: I-MRT Rama 9 / Isixhumanisi Sesikhumulo Sezindiza saseMakkasan
Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon, i-Thailand
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Midori
* Ngenxa yesimo se-Covid, siyaqonda ukuthi indinganiso yokuhlanza ingu-no.1 lapho izivakashi zethu zingakhathazeka ngakho sanquma ukusebenzisa isevisi yokuhlanza evela e-Roys Vesta, inkampani yokuhlanza enezinga eliphezulu e-Thailand. Zonke izihambeli zingaqiniseka ukuthi siyakukhathalela futhi sikulungiselela okungcono kakhulu.
Ukuhlala kwanyanga zonke akufakiwe ugesi, amanzi ne-inthanethi. Isilinganiso cishe siphakathi kuka-2,500-3,000 baht. (Ugesi wawubalwa ngemitha kahulumeni.)
Isitezi esiphezulu esiphumuzayo ongajabulela ukubuka futhi uzenze usekhaya nge-Netflix! Amamitha angu-400 ukusuka eRama 9 MRT Station. Futhi unogada amahora angu-24 kanye ne-CCTV. Ziyizitobhi ezi-2 kuphela eziya esiteshini sase-Asok lapho i-Terminal 21 itholakala khona.(I-BTS Line) amamitha angu-500 ukusuka e-Makkasan Airport Rail Link Station.
Amamitha-skwele angama-36 ubude namamitha ayi-3.6 ukuphakama. Ifakwe ifenisha ethokomele, i-air-conditioner nezinsiza eziwusizo.
Igumbi belihlotshiswe ngesitayela se-semi-cottage & ethokomele linodonga lwengilazi egumbini lokuphumula. Ungazizwa ushajwa futhi ngisho uhlala edolobheni elikhulu. Kunconywe kakhulu ukubeka izinyawo zakho kukhaphethi wethu wangempela wase-Thai!
- Ijubane eliphezulu le-inthanethi
- Ikhaphethi yaseThai
- Imimese & ibhodi lokusika
- Izinkezo, izimfoloko, izinti
- Amapuleti, izinkomishi, izibuko, izitsha
Futhi batusa kakhulu ukuthi uphume futhi uzame ukudla okumnandi komgwaqo wase-Thai.
- Umbhede we-Queen size
- Imicamelo nengubo
Singanikeza izivakashi umatilasi ngemva kuka-2.
- Indlu yangasese ehlakaniphile
- Ukugeza umzimba & shampoo
- Izinwele namathawula okugeza
- Iphepha lezicubu
- Isomisi sezingubo
- Intambo yezingubo
Kuyisitayela sempilo yasemadolobheni ukuthi yonke into ivaliwe phakathi nebanga lokuhamba. Ungahamba uye enxanxatheleni yezitolo i-Metro Mall eRama 9 MRT Station ukuze uthole okuya ngasethunjini noma ukuhlangana nabantu esitolo sekhofi sendawo noma ugunde izinwele!
Inxanxathela yezitolo enkulu yesikhungo se-IT njengedolobha laseFortune iphezulu ukusuka enxanxatheleni yezitolo iMetro. I-Central Rama 9 ibekwe ngakolunye uhlangothi, izindawo zokudlela eziningi ezidumile, amagama emikhiqizo yemigwaqo ephakeme, imitholampilo yobuhle negilosa ingatholakala lapha.
Futhi, kulula kakhulu ukuya edolobheni. Izitobhi ezi-2 kuphela ukusuka eRama 9 MRT Station kuya kulayini we-BTS esiteshini sase-Asok BTS.
Zizwe ukhululekile ukuthumela umbhalo noma ungishayele uma udinga usizo. Ngihlale ngijabule ukukusiza! :)
Ngemva kokubhuka, ngizothumela lonke ulwazi oludingekayo mayelana nesikhala nolwazi oluwusizo eduze nezindawo ezithakazelisayo eziseduze.
Ngemva kokubhuka, ngizothumela lonke ulwazi oludingekayo mayela…
UMidori Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Khet Ratchathewi namaphethelo